बिहेपछि यौ’न चाहना हुन्न ? यस्तो रहेछ कारण र उपाय – Hamro Nepali Samachar
Home/ स्वास्थ्य/बिहेपछि यौ’न चाहना हुन्न ? यस्तो रहेछ कारण र उपाय
बिहेपछि यौ’न चाहना हुन्न ? यस्तो रहेछ कारण र उपाय
यौ’न चाहना नहुने विभिन्न कारण हुन्छन् । जसमध्ये सबैभन्दा प्रमुख कारण रागरसको गडबडी हो । त्यस्तै व्यक्तिले उच्च रक्तचाप, मनोद्दिपक (मानसिक रोग) को औषधि र मधुमेहको औषधि सेवन गरेको अवस्थामा पनि उसमा यौ’न चाहना नआउन सक्छ ।
यसका साथै आफ्नो दिनचर्या निकै व्यस्त हुने व्यक्तिमा थकान र विभिन्न तनावले मानसिक रुपमा तयार नहुनाले पनि व्यक्तिमा यौ’न चाहना नआउन सक्छ । यसका साथै केही हदसम्म वंशाणुगत गुणका कारणले पनि यौ’न चाहनामा फरक पर्न जान्छ । तर यी समस्या परामर्शको माध्यमबाट हल गर्न सकिने यौ’न विशेषज्ञ बताउछन् ।
यौ’न इच्छा नआउनु कुनै रोग होइन र यसले शरीरमा कुनै किसिमको हानी गर्दैन् । मानिसलाई यौ’नको आवश्यकता पर्छ । किनकी मानिस यौ’निक प्राणी हो । तर यौ’न सम्पर्क नराख्दैमा मानिस बाच्दैन भन्ने होइन । यौ’न सम्पर्कबाट टाढा रहदा अझ एचआईभी एड्स तथा यौ’न संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ । त्यसैले यौ’न चाहना नहुनु धेरै ठूलो समस्या होइन । तर विवाह पछिको यौ’न सम्बन्धमा भने यसले केही प्रभाव पार्छ नै । श्रीमान्लाई यौ’न चाहना भइरहने र श्रीमतीलाई यौ’न चाहना नहुदा समस्या पैदा हुन्छ ।
श्रीमानको इच्छा पुरा गर्न पनि श्रीमतीले यौ’न सम्पर्क राखिदिनु पर्ने सचन हाम्रो समाजमा छ । यसका साथै श्रीमतीले यौ’न चाहना नै छैन भनेपछि श्रीमानले शंकाको दृष्टिले हेर्ने परम्परापनि समाजमा छ । त्यसैले यौ’न चाहना नहुनु कुनै रोग नभए पनि विवाह पछिको यौ’नले विशेष महत्व राख्छ ।
त्यसैले कसरी हुन्छ, विवाहपछि श्रीमान श्रीमतीबिच सहमतीमा यौ’न सम्पर्क राख्नु पर्छ । र एकले अर्काको भावना बुझ्नु पर्छ । यौ’न चाहना कम हुदैमा शंकाको दृष्टिले हेर्ने संस्कार हटाउनु पर्छ । किनकी यौ’न चाहना व्यक्ति व्यक्ति फरक हुनसक्छ । इच्छा वेगर गरेको यौ’न सम्पर्क वलात्कार हो ।
सुत्दाखेरी मुखबाट र्‍याल चुहिन्छ ? यसरी रोक्नुस्
लामो समय याै न स म्पर्क नगर्दा आउछ यस्ता समस्या